Umthi Chipper NgePetroli / idizili / Injini yombane
I-Wood chipper luhlobo lwe-chip shredder, esetyenziselwa ukuqhubekeka kwepine, ukhuni olwahlukeneyo, ipoplar, ifir yaseTshayina, uqalo lwantlandlolo kunye nezinye izinto. Kukulungele ngakumbi ukuqhubekeka neetshipsi zeenkuni kwindawo yokutya enesidima.
I-Stroke Petroli yoBuchule beBrashi yokusika iGrass
Isixhobo sokucoca ingca sisixhobo sokulungiselela ukutshiza ingca, utyani, njl. Njl. Inentloko yokusika, injini, ivili lokuhamba, indlela yokuhamba, iblade, intsimbi yokubamba ngesandla, kunye nenxalenye yolawulo.
Intloko yokusika ikhwele kwivili elibalekayo, i-injini ine-injini, ishafu yesiphumo se-injini ine-blade, kwaye i-blade isebenzisa isantya sokujikeleza kwe-injini ukuphucula isantya, ukugcina ukusebenza kwabasebenzi ixesha kunye nokunciphisa inani labasebenzi.
Ukubulala iintsholongwane Sebenzisa umatshini wokutshiza wokuhambisa inkungu ngokushushu
Lo matshini ngoku usetyenziswa ngokubanzi kwisicelo sesichumiso, ukubulala iintsholongwane kunye nokucoca izindlu zokugcina izityalo, amahlathi, izitiya, iigadi zeti kunye nezinye izityalo ezivulekileyo.
Uhlobo lwentsimbi engenasici kunye nomatshini wepetroli ophathwayo wezolimo okanye wegadi
Enkosi ngokusebenzisa umatshini wokuhambisa oveliswe yinkampani yethu. Luhlobo olutsha lwemveliso ephandwe ngokuzimeleyo kwaye yaphuhliswa yinkampani yethu. Luhlobo oluphambili kakhulu lweemveliso ezifanayo okwangoku. Lo matshini usekwe kumgaqo weinjini yetekhnoloji ye-aerospace kwaye yamkela injini yokubetha engenasondlo. Akukho zixhobo zijikelezayo ngexesha lokusebenza, akukho kunxiba kunye nokudiliza phakathi kwamalungu, akukho lubrication lufunekayo. Ke ngoko, ulondolozo lulula kwaye ubomi benkonzo bude. Ukongeza, ukusetyenziswa okuphantsi kwepetroli kunye nokusebenza kakuhle kokusebenza ziimveliso zetekhnoloji ephezulu yokutshiza izitshabalalisi kunye nokubulala iintsholongwane.